Vaovao - Ny dingana vita amin'ny famokarana tavoahangy
Major Karazana fitaratra:
Type I - Boribory Silasy
Type II - vera sokay vita amin'ny vera
Type III - Sora lava-vera vera
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana vera dia misy fasika eo ho eo amin'ny 70% miaraka amina fifangaroana ranona soda, limestone ary akora voajanahary - miankina amin'ny fananana irina ao anaty tratra.
Rehefa manamboatra fitotoana kapoaka vita amin'ny soda, torotoro, fitaratra na voaroy, na cullet ny akora iray lehibe. Ny habaky ny cullet izay ampiasaina amin'ny batch vera dia miovaova. Ny Cullet dia miempo amin'ny hafanana ambany kokoa izay mampihena ny fitrandrahana angovo ary mitaky fitaovana kely kokoa.
Ny vera Borosilicate dia tsy tokony ho miverina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fitaratra mafana. Noho ny toetrany mahatohitra hafanana, ny vera borosilicate dia tsy hiempo amin'ny mari-pana mitovy amin'ny vera Soda Lime ary hanova ny fahitana ny tsiranoka ao anaty lafaoro mandritra ny dingana mampihena indray.
Ny fitaovana vita amin'ny mofomamy rehetra, anisan'izany ny cullet, dia voatahiry ao anaty trano fandroana iray. Avy eo dia ny herinaratra dia omena any amin'ny faritra mizana sy mifangaro ary amin'ny farany dia asandratra ho any amin'ireo fitoeran-javaboary izay mamokatra ny lafaoro fitaratra.
Fomba entina hamokatra ireo takelaka fitaratra:
Fitaratra notsofina Fantatra ihany koa ny fitaratra misy lasitra. Amin'ny famoronana vera mitsoka, ny vera mafana avy amin'ny lafaoro dia ampitaina amin'ny milina fanamboarana sy any anaty lava-bato izay anerenan'ny rivotra hamokatra ny vozony sy endrika fananganana ankapobeny. Rehefa mamorona izy ireo, dia atao hoe Parison, avy eo. Misy dingana roa miavaka amin'ny famoronana ilay boaty farany:
Fitsapana hitsoka sy hitsoka - ampiasaina amin'ny fitoeran-java-mifono kely izay noforonina amin'ny rivotra manery
Fomba fanaovan-gazety & tsofina- ampiasaina amin'ny fitoeran-java-famarana vita amin'ny savaivony lehibe izay misy ny parison amin'ny alàlan'ny fanerena ny fitaratra manohitra ny bobongolo tsy misy fotaka
Fitaratra fantson-drano dia miforona amin'ny alàlan'ny fizotran-drafitra mitohy amin'ny alàlan'ny fizotran'ny Danner na Vello mba hahatratrarana ny savaivony sy ny hatevin'ny marina. Ny vera dia manintona amin'ny tsipika fanohanana avy amin'ny milina mpanao sary.
Dingana Danner - ny fitaratra miboiboika avy amin'ny lafaoro amin'ny lafaoro amin'ny endrika boribory
Manaova Vello - ny fitaratra mihetsika avy amin'ny lafaoro amin'ny lafaoro ho ao anaty vilia iray izay avy eo
Voaroaka fitaratra vita amin'ny vera
Dingana sy tsofina - rivotra manindrona dia ampiasaina hamolavolana ny gob ho ao anaty valan-jaza, izay mametraka ny tendan'ny tendany ary manome endrika mitovy amin'ny gob. Aroso avy hatrany amin'ny ilany amin'ny masinina ilay parison, ary ampiasaina ny rivotra hitsoka azy amin'ny endrika tiany.
Fomba fanaovan-gazety sy tsofina- napetraka aloha ny mpiondana, avy eo ny rivotra avy eo hanamboarana ny gob ao am-ponja.
Tamin'ny fotoana iray, ity fomba fiasa ity dia nampiasaina ho an'ny takelaka vava midadasika, saingy miaraka amin'ny fanampian'ny Fampivoarana vohon'ny Vacuum, dia azo ampiasaina koa izao izy ho an'ny fangatahana vava tery.
Ny tanjaka sy ny fampielezana dia tena mahasoa indrindra amin'ity fomba fananganana fitaratra ity ary namela ny mpanamboatra hanangona zavatra mahazatra "maivana" toy ny tavoahangy labiera.
Conditioning - na eo aza ny fizotrany, raha vantany vao miforona ny fitoeran-jiro mitsofoka, dia mientana ao anaty Annealing Lehr ny fitoeran-drano, ka miverina hatramin'ny 1500 ° F ny mari-pana, avy eo ahena mihena tsikelikely any ambanin'ny 900 ° F.
Ity fiakarana mafana sy miadana ity dia manafoana ny adin-tsaina ao anaty fitoeran-drano. Raha tsy misy an'io dingana io, dia ho simba moramora ny fitaratra.
Fitsaboana ny tany - ny fitsaboana ivelany dia ampiharina mba hisorohana ny fanodinkodinana, izay mahatonga ny vera ho mora simba. Ny coating (matetika mifangaro polyethylene na varahina mifangaro vita amin'ny oxide) dia atsofoka ary mihetsika eo amin'ny velon'ny vera mba hamoronana coating vy. Ity coating ity dia manakana ny tavoahangy tsy hifikitra amin'ny iray hafa mba hampihenana ny fahatapahana.
Ny coating tin oxide dia ampiharina amin'ny fitsaboana fitsaboana faran'izay mafana. Ho an'ny fitsaboana fitsaboana mangatsiaka, mihena eo amin'ny 225 sy 275 ° F ny hafanan'ireo fitoeran-java-kaopy alohan'ny fampiharana. Ity sasina ity dia azo sasana. Ny fitsaboana amin'ny End End dia ampiharina alohan'ny dingana fanalefahana. Ny fitsaboana ampiharina amin'ity fomba ity dia mifamadika amin'ny vera ary tsy azo sasana.
Fitsaboana anatiny - Ny fitsaboana Fluorination anatiny (IFT) no fomba izay mahatonga ny vera Type III ho ao anaty fitaratra Type II ary ampiharina amin'ny fitaratra mba hisorohana ny mamony.
Fanaraha-maso ny kalitao - Ny fanaraha-maso amin'ny kalitao mafana dia misy fandrefesana lanjan'ny tavoahangy ary manara-maso ny haben'ny tavoahangy misy refesina tsy misy mandeha. Taorian'ny nandao ny fiafaran'ny hatsiaka dia namaky ny milina fanaraha-maso elektrika izay avy hatrany namantatra ireo lesoka. Anisan'izany, fa tsy voafetra amin'ny: fanaraha-maso rindrina amin'ny rindrina, fanalana ny fahasimbana, famakafakana ny dimensional, fanaraha-maso ny famonosana, fanaraha-maso amin'ny rindrina ary famaritana fototra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Lab Glass Defect & How to inspect Glass Glass, azafady tsindrio eto raha hamaky bebe kokoa ary alàlan'ny toromarika fanondroana mba hanampiana anao hamantatra na misy anao tsy tokony hokarakaraina.
Ohatra an'ny lalànan'ny tsofina sy mitsoka
Jugs natao tanana
Tavoahangy misy menaka
Ireo ohatra an'ny mpanao pirinty sy tsofina
Toeram-pisakafoanana am-bava malalaka
Grotika boribory fahana lavitra
Ny halavan'ny fantsom-panafody avy amin'ny 1.6mm ka hatramin'ny 66.5mm
Misintona ny vidin'ny hatramin'ny 400m minitra iray ho an'ny habeny kely
Ny vera mikoriana avy amin'ny lafaoro eo amin'ny lafaoro amin'ny endrika boribory, izay mianjera hatrany amin'ny tendrony ambony amin'ny satroka misy refractory, vita amin'ny tsipika matevina na tsipoapoaka mihodina.
Aforitra manodidina ny sisin-tànana ny tadiny, mba hamoronana gony malefaka, izay mikoriana midina moron-tanana ary eo ambonin ny tendron'ny mony.
Avy eo dia mihodina eo ambonin'ilay tsipika mpanohana azy ireo ny milina fanantonana iray amin'ny 120m miala.
Ny refy amin'ny fantsona dia voafaritra rehefa mihamangatsiaka ny fitaratra noho ny toerana itodihany eo amin'ny faritra tsy azo itokisana eo anelanelan'ny blowpipe sy ny làlan-dresaka voalohany.
Ny fitaratra dia mitsonika avy ao amin'ny lafaoro ao anaty lafaoro ao anaty vilia iray izay ametrahana ny mandranty miendrika valahana na lakolosy iray voahodidin'ny peratra orifice.
Ny vera mikoriana amin'ny alàlan'ny elanelan'ny lakolosy sy ny peratra avy eo mandehandeha amin'ny tsipika mihodina mankany amin'ny milina fanaovana sary hatramin'ny 120m miala.
Tube Draw control control
Raha vantany vao vita ny fantsona dia, mizaha fitsapana maro sy fisafoana marobe mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra kalitao izy ireo. Ny fizahana fakana maso dia tarihan'ny rafitra fakantsary avo lenta sy fanandratana avo lenta mba hanesorana tsy mety. Raha vao mamorona sy manapaka amin'ny endrika mety, dia manamarina ny refy.
Ohatra amin'ireo vera fantson-drano